समाचार - डिज्नील्याण्ड पार्क को मचान,
Scaffolding प्रोजेक्ट-टुजरल्याण्ड अफ डिस्नेल्याण्ड पार्क, शंघाई
भोलि शंघाई डिज्नील्याण्ड को परियोजनापार्कको दक्षिणपश्चिमी कुनामा अवस्थित छ। निर्धारित निर्माण अवधि भित्र पूरा गर्नका लागि आन्तरिक विभाजन पर्खाल एकै समयमा MEP स्थापनाको बखत निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। यसैले, हामी हाम्रो अपनाउँछौंरिlockलक लक मचान. मचानबर्डलेवे र यसको वरपर अपरेशन प्लेटफर्मको साथ,9मीटरको उचाईको साथ अपरेशन प्लेटफर्म प्रदान गर्न आवश्यक छ। विभाजन भित्ता र भित्री भित्ता बिच एक cm० सेमी परिचालन खाली ठाउँ आवाश्यक हुन्छ। सिढी, ब्रिडलवे, र मनोरन्जन ट्र्याकहरू समाप्त भइसकेको हुनाले हामीले यी सुविधाहरू त्याग्नै पर्छ। यस आयोजनाको आयाम 95 00 ०० मी³ छ, र निर्माण अवधि १ 15 दिन हुने आशा गरिएको छ।
हामीले हाम्रो प्रकारको बी प्रयोग गर्‍यौं औंठी लक मचान यस परियोजना को लागी, toghether हाम्रो साथ इस्पात पाटी, इस्पात सिढी र इस्पात toeboards।
मानक बीचको स्पेसिm २ m × २m छ, र ठाडो दूरी १. 1.5 m छ। विशेष इस्पात पट्टिहरू अपरेटिंग प्लेटफर्मको रूपमा कार्य क्षेत्रमा राखिन्छन्।
हामी द्वारा समाधान गरिएको मुख्य समस्याहरू निम्नानुसार छन्:
१. roof मिटर उचाईको निर्माण कार्य सञ्चालन प्लेटफर्म छानाको छानाको कामको लागि र MEP को स्थापनाको लागि। स्टिल फलकहरू ठाँउमा राखिन्छ जहाँ तेर्सो पट्टी व्यवस्था अपेक्षाकृत नियमित हुन्छ।
२. स्टिल बिमलाई वरपर फ्याँक्न आवश्यक छ, त्यसैले त्यहाँ वरिपरि कार्य गर्ने ठाउँ हुनु आवश्यक छ। यसैले वरपर काम गर्ने ठाउँ इस्पातको फल्याकहरूले ढाकिएको छ।
P. आन्तरिक विभाजन र। बीच उचित ठाउँ प्रदान गर्दै निर्माण मञ्च। विभाजन भित्ताको निर्माणलाई दुई कार्य प्रक्रियामा विभाजन गरिएको छ, जुन स्थापना र चित्रकारी हुन्। स्थापनालाई निर्माण प्लेटफर्म र आन्तरिक पार्टिसनको बीचमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो ठाउँ चाहिन्छ, जबकि पेन्टि paintingले निर्माण प्लेटफर्मलाई सकेसम्म आन्तरिक विभाजनको नजीक प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा मूल scafolding र भित्ता बीच ठूलो अन्तर छ। त्यसोभए स्टीलको तखतहरू लोड गरिसकेपछि, हामी पूरकका लागि स्टिल पाइप र कपलर प्रयोग गर्दछौं (भित्ता फ्रेम रेखाचित्र हेर्नुहोस्)।
P. यस क्षेत्रमा इस्पात स्तम्भको छिड़काउने कामको लागि कार्यरत सतह प्रदान गर्दै। डिजाइनले विशेष गरी स्टीलको स्तम्भको अपरेटिंग सतह समावेश गर्दैन। यसैले, हामीले हाम्रो स्फोल्डलाई मुख्य असर संरचनाको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ। र पछि, हामी इस्पातमा पाइप, कपलर र काठको काठसहितको अपरेटिंग सतह सेटअप गर्दछौं।
The. भुईं फ्लोरमा पहुँचका साथ दुईवटा सीढीहरू प्रदान गरिएका छन्।
खाली प्रशोधन क्यारी गर्नुहोस्
कहिले मचाननिर्माण गरिएको छ, प्रत्येक कम्पोनेन्टले कम मनोरञ्जन ट्र्याकबाट बच्नुपर्दछ, र भित्री विभाजन पर्खालको निर्माणको लागि अपरेटिंग खाली ठाउँ छोड्नु पर्छ। भित्री विभाजन पर्खाल करीव 7..5 मीटरको उचाइमा निर्माण गरिएको छ, र माथिल्लो भागमा खाली सदस्य प्रयोग गर्न ठाउँ छ। अपरेसन स्कोफोल्डिंग m मी वा6मीटर ट्रस घटक, १ I आई-स्टील र स्टिल पाइप, आदि प्रयोग गरेर गरिन्छ।
जब ट्रसका टुक्राहरू प्रयोगमा हुन्छन्, दुबै छेउमा वेजहरू कडा गरिनुपर्दछ, र टुर्सलाई अस्थिर हुनबाट रोक्नको लागि टुक्राहरूको दिशामा लेजरहरू खडा गरिनु पर्दछ (चित्र in मा देखाइए जस्तै)।
पोष्ट समय: मे ० 07-२०१२